ရာသီလာစဉ်မှာ အတူနေခြင်းက စိတ်ချရလား - Hello Sayarwon
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 12/11/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသားတွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေသိချင်နေမယ့် အချက်လေးတစ်ခုကို ဒီဆောင်းပါးလေးထဲကနေဖြေပေးပါရစေနော်။ ဒါကတော့လေဒီလေးတွေရာသီလာနေစဉ်မှာ အတူနေတာက စိတ်ချရရဲ့လား။ ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ အချက်ပေါ့။
ရာသီလာနေစဉ်မှာ အတူနေလို့ရလားဆိုရင်တော့ အတူနေလို့ရပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဆက်မေးစရာရှိမှာက ကိုယ်ဝန်ရသွားနိုင်လားဆိုတဲ့ မေးခွန်းဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ဖြစ်ခဲတယ်ပဲပြောရမှာပါ။
ကလေးလိုချင်တဲ့ စုံတွဲတွေအနေနဲ့ဆိုရင် ဒီအချိန်မှာ အတူမနေသင့်ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ ရာသီလာနေစဉ်မှာ အတူနေခြင်းက ကလေးရရှိနိုင်ခြေ ပုံမှန်ထက်နည်းနေတာကြောင့်ပါ။
အဲ ဒါပေမယ့် ကလေးမရနိုင်လောက်ပါဘူးဆိုပြီး ဒီအချိန်မှာ အကာအကွယ်မသုံးဘဲနေရလောက်အောင်လည်း စိတ်ချလို့ရတဲ့ အနေအထား မဟုတ်ပါဘူး။ ရနိုင်ခြေနည်းပေမယ့် ဒီနည်းနည်းလေးက ဖြစ်မလာရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဒီနေရာမှာသတိထားရမယ့်အချက်တစ်ခုက အမျိုးသားရဲ့ သုက်ပိုးက အမျိုးသမီးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ တစ်ပတ်လောက်အထိ ရှင်သန်နေနိုင်ပါတယ်။ လေဒီတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က ရာသီစက်ဝန်းမတူနိုင်ပါဘူး။လေဒီတစ်ယောက်တည်းမှာတောင် ရာသီစက်ဝန်းက အမြဲတစ်ထပ်တည်းမကျနိုင်ပါဘူး။ တကယ်လို့ရာသီစက်ဝန်းက ၂၈ ရက်မဟုတ်ဘဲ ၂၂ ရက်စက်ဝန်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ရာသီလာစဉ်မှာ အတူနေခြင်းကြောင့် ကလေးရနိုင်ခြေကပိုများနေနိုင်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးကတော့ ရာသီလာနေစဉ်မှာ အတူနေမယ်ဆိုရင် အမျိုးသားက အကာအကွယ်သုံးတာပါ။
ရာသီလာချိန်မှာ အတူနေတာက လုံခြုံစိတ်ချရမှုအပြည့်အဝတော့မရှိပါဘူး။ ရာသီလာနေစဉ်မှာ အတူနေခြင်းကြောင့် လိင်ကနေဆင့် ကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေအများကြီးကူးစက်နိုင်ခြေရှိနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိန်းမကိုယ်ပိုးဝင်ကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်သလို ရာသီလာချိန်မှာဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့် မိးမကိုယ်မှိုပိုးဝင်တာမျိုးလည်းခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေမှာလည်း ဒီအချိန်မှာ လိင်ဆက်ဆံမှုကနေတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေ ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေပိုများနေနိုင်ပါတယ်။ ရာသီလာစဉ် အတူနေခြင်းကြောင့်
Chlamydia (လိင်ကနေတဆင့်ကူးစက်နိုင်သောဘက်တီးရီးယားပိုး ကူးစက်ခံရခြင်း)
ကာလသားရောဂါအပါအဝင် လိင်အင်္ဂါမှာပေါက်တဲ့ ယားနာလိုမျိုးပြဿနာတွေကိုပါခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ရာသီလာနေစဉ်မှာ အတူနေခြင်း ကကောင်းကျိုးရောရှိလား…..
ရာသီလာနေစဉ်မှာ အတူနေတာက ဆိုးကျိုးပဲရှိတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ကောင်ကျိုးတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့
ရာသီလာစဉ်မှာ အတူနေခြင်းကြောင့် ရာသီသွေးဆင်းရက်တိုသွားတာ
ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေတာစတဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
ရာသီလာနေစဉ်မှာ အတူနေတော့မယ်ဆိုရင် ဘာတွေလုပ်ဆောင်ရမလဲ…………
ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ကို ရာသီသွေးဆင်းနေတဲ့အကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအသိပေးထားပါ။
လစဉ်သုံးပစ္စည်းကို မကြာခဏလဲလှယ်ပေးပါ။ ဘက်တီးရီးယားတွေပေါက်ဖွားမှုကနေ ကာကွယ်နိုင်ဖို့ပါ။
Tampon အသုံးပြုထားတယ်ဆိုရင် ဆက်ဆံခြင်းမပြုခင်မှာ ဖယ်လိုက်ပါ။
အိပ်ရာခင်းပေါ်မှာရေစုပ်တဲ့ တဘက်စကြီးကြီးတစ်ခုကိုဖြန့်ခင်းထားပေးပါ။ပေကျံမှုကနေ ကာကွယ်ဖို့အတွက်ပါ။
အိပ်ရာဘေးနားမှာ wet tissue ဒါမှမဟုတ်ရေစိုဝတ်စသန့်သန့်တစ်ခုယူထားပေးပါ။
ဆက်ဆံပြီးချိန်မှာ ချက်ချင်းဆီးသွားပေးပြီး ဆီးအိမ်ထဲကို ဘက်တီးရီးယားတွေ ဝင်ရောက်မှုကနေ ကာကွယ်နိုင်ဖို့ပါ။
Is it safe to have sex during menstruation?https://www.medicalnewstoday.com/articles/321667.php Accessed Date 26 August 2019
Is It Safe to Have Sex During Your Period? Tips, Benefits, and Side Effectshttps://www.healthline.com/health/womens-health/sex-during-periodsAccessed Date 26 August 2019
Is Sex During Menstruation Harmful? The Scientific Viewhttps://www.curejoy.com/content/sex-during-menstruation-period-is-it-safe/?utm_source=Popular&utm_medium=FCM&utm_campaign=PushAccessed Date 26 August 2019
ရာသီလာနေစဉ် လိင်ဆက်ဆံ မယ်ဆိုရင်